23 Ka oge na-aga, ha bịara kọọrọ Devid, sị: “Lee, ndị Filistia na-ebuso Kaịla+ agha, ha na-ebukọrọkwa ihe dị n’ebe nzọcha mkpụrụ.”+
2 Devid wee jụọ Jehova ase,+ sị: “Ọ̀ bụ m gaa, m̀ ga-egbu ndị Filistia ndị a?” Jehova wee sị Devid: “Gaa, ị ga-egbu ndị Filistia wee zọpụta Kaịla.”
3 Ndị ikom Devid wee sị ya: “Lee! Egwu ji anyị ugbu a anyị ka nọ ebe a na Juda,+ ma ya fọdụzie mgbe anyị gara Kaịla ibuso ndị agha ndị Filistia agha!”+
4 Devid wee jụọ Jehova ase ọzọ.+ Jehova wee zaa ya, sị: “Bilie, gbadaa Kaịla, n’ihi na m ga-enyefe ndị Filistia n’aka gị.”+
5 Ya mere, Devid na ndị ikom ya jere Kaịla wee buso ndị Filistia agha, chịrịkwa anụ ụlọ ha laa, ma sụọ ha akwụ; o wee bụrụ Devid zọpụtara ndị bi na Kaịla.+
6 O wee ruo mgbe Abayata+ nwa Ahimelek gbakwuuru Devid na Kaịla na o ji efọd+ gbadaa.
7 Ka oge na-aga, a kọọrọ Sọl, sị: “Devid abịawo Kaịla.”+ Sọl malitere ịsị: “Chineke ewerewo ya resị m,+ n’ihi na o mechibidowo onwe ya ụzọ site n’ịbata n’obodo nwere ọnụ ụzọ na ihe e ji atụchi ya.”
8 Sọl wee kpọkọta ndị agha ya niile maka agha, ka ha gbadaa Kaịla, ịga nọchibido Devid na ndị ikom ya.
9 Devid wee mata na Sọl na-akpara ya nkata ọjọọ.+ O wee gwa Abayata onye nchụàjà, sị: “Biko, weta efọd ebe a.”+
10 Devid wee gaa n’ihu ịsị: “Jehova bụ́ Chineke Izrel,+ ohu gị anụwo n’ezie na Sọl na-achọ ịbịa Kaịla ka o bibie obodo a n’ihi m.+
11 Ndị nwe ala Kaịla hà ga-enyefe m n’aka ya? Sọl ọ̀ ga-agbadata dị nnọọ ka ohu gị nụrụ? Jehova bụ́ Chineke Izrel, biko, gwa ohu gị.” Jehova wee sị: “Ọ ga-agbadata.”+
12 Devid wee gaa n’ihu ịsị: “Ndị nwe ala Kaịla hà ga-enyefe mụ na ndị ikom mụ n’aka Sọl?” Jehova wee sị: “Ha ga-enyefe unu.”+
13 Devid biliri ozugbo ahụ, ya na ndị ikom ya, ihe dị ka narị ndị ikom isii,+ ha wee si na Kaịla pụọ wee na-ejegharị ebe ọ bụla ha pụrụ ijegharị. E wee kọọrọ Sọl na Devid agbapụla na Kaịla, o wee hapụ ịga.
14 Devid wee biri n’ala ịkpa n’ebe siri ike mbanye, o wee biri n’ógbè nke bụ́ ugwu ugwu n’ala ịkpa Zif.+ Sọl wee na-achọ ya mgbe niile,+ ma Chineke enyefeghị ya n’aka ya.+
15 Devid wee na-atụ egwu n’ihi na Sọl abịawo ịchọ mkpụrụ obi Devid mgbe ọ nọ n’ala ịkpa Zif nke dị na Horesh.+
16 Jọnatan nwa Sọl wee bilie gakwuru Devid n’ime Horesh, ka o wee mee ka o nwee ike+ n’ebe Chineke nọ.+
17 O wee sị ya: “Egwu atụla gị;+ n’ihi na aka Sọl nna m agaghị enweta gị, gị onwe gị ga-abụ eze+ Izrel, mụ onwe m ga-abụkwa osote gị; Sọl nna m makwaara nke ahụ.”+
18 Ha abụọ wee gbaa ndụ+ n’ihu Jehova; Devid wee biri na Horesh, ma Jọnatan lara n’ụlọ ya.
19 E mesịa, ndị Zif+ gakwuuru Sọl na Gibia,+ sị: “Ị̀ makwa na Devid zoro+ n’ebe dị anyị nso nke siri ike mbanye, na Horesh,+ n’ugwu Hakaịla,+ nke dị n’akụkụ aka nri Jeshaịmọn?+
20 Ugbu a, eze, dị ka ọ na-agụ nnọọ mkpụrụ obi gị agụụ+ ịgbadata, gbadata, ihe anyị ga-eme bụ inyefe ya n’aka eze.”+
21 Sọl wee sị: “Ndị Jehova gọziri agọzi ka unu bụ,+ n’ihi na unu nweere m ọmịiko.
22 Biko, gaanụ tinyekwuo mgbalị chọpụta ma hụ ebe ọ nọ, ya bụ, ebe ọ na-azọ ụkwụ—onye ọ bụla nke hụrụ ya n’ebe ahụ—n’ihi na a gwawo m na ọ dị nnọọ aghụghọ.+
23 Chọọnụ ma chọpụta ebe nzuzo niile ọ na-ezo; unu ga-ejikwa ihe àmà ya bịakwuteghachi m, m ga-esokwa unu gaa; ọ ga-erukwa na, ọ bụrụ na ọ nọ n’ala ahụ, m ga-achọkwa ya nke ọma n’obodo+ ndị dị na Juda.”
24 Ha wee bilie buru Sọl ụzọ garuo Zif,+ ka Devid na ndị ikom ya nọ n’ala ịkpa Meyọn+ nke dị n’Araba+ n’ebe ndịda Jeshaịmọn.
25 E mesịa, Sọl na ndị ikom ya bịara ịchọ ya.+ Mgbe ha kọọrọ Devid, ọ gbadara ozugbo na nkume dị elu+ wee biri n’ala ịkpa Meyọn. Mgbe Sọl nụrụ ya, ọ chụụrụ+ Devid banye n’ala ịkpa Meyọn.
26 N’ikpeazụ, Sọl bịarutere n’otu akụkụ ugwu, Devid na ndị ikom ya nọkwa n’akụkụ nke ọzọ n’ugwu ahụ. Devid wee mewe ngwa ngwa ịgbapụ+ n’ihi Sọl; n’oge ahụ niile, Sọl na ndị ikom ya nọ na-achọ ịgba Devid na ndị ikom ya gburugburu ka ha jide ha.+
27 Ma otu onye ozi bịakwutere Sọl, sị: “Mee ngwa ngwa lawa, n’ihi na ndị Filistia awakpowo ala anyị!”
28 Sọl wee kwụsị ịchụ Devid+ wee jee izute ndị Filistia. Ọ bụ ya mere ha ji kpọọ ebe ahụ Nkume Dị Elu nke Nkewa.
29 Devid wee si n’ebe ahụ gbagoo wee jee biri n’ebe siri ike mbanye nke dị n’En-gidaị.+
mailto:?body=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1011452%26Book%3D9%26Chapter%3D23%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl